31 / 07 / 2021 31 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 401 Views စာ0မှတ်ချက် 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ်, ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဟယ်ရီပေါ်တာ ၂၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်, Jadlam ကစားစရာများ & ပုံစံများ, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ
LEGO Harry Potter တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးလျှော့စျေးကိုရယူရန်အချိန်ရှိသေးသည် 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ် မှ Jadlam ကစားစရာများ & ပုံစံများ.
Brick Fanatics p ကိုရartနှစ် ၂၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနှင့် ၁၅% လျှော့ရန်အွန်လိုင်းလက်လီအရောင်းဆိုင်နှင့်နီးစပ်သူ လက်ရှိစာရင်းစျေးနှုန်းကိုအမှတ်အသားပြုထားပြီးသားဖြစ်သည် LEGO GroupRRP ဆိုလိုသည်မှာသင်ပေးရမည့်နောက်ဆုံးစျေးသည် ၅၅.၂၁ ပေါင်သာရှိသည်၊ ၎င်းသည် ၈၅၁ အပိုင်းအစ၏မူလကုန်ကျစရိတ်ထက် ၂၀% သာရှိသည်။
သေတ္တာနှစ်လုံးနှင့် minifigures ခုနစ်ခုပါ ၀ င်သော၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသော set တစ်ခုဖြစ်သည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကောင်းသောသဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။ Modular Hogw ၏ပုံစံအသစ်စုဆောင်းခြင်းကိုသင်စိတ်မ ၀ င်စားပါartဤနွေရာသီလှိုင်းတွင်တည်ဆောက်သည်၊ ၎င်းသည်သင်၏ LEGO Harry Potter စုဆောင်းမှုနှင့်အတူချောမွေ့စွာလိုက်ဖက်မည့် ၂၀၂၁ အတွက်အတွဲသစ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်ကုဒ်ရိုက်ထည့်ရန်လိုသည် BF153 at ထွက်ခွာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးလျှော့စျေးကိုသုံးရန် ယနေ့ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်၊ ၂၃.၅၉ အထိအကျုံး ၀ င်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာဤဇာတ်လမ်းကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ရန်သင်၌ ၁၂ နာရီသာကျန်သေးသည်။ Jadlam ၏သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်တွင်စာရင်းသွင်းရန်လည်းမမေ့ပါနှင့်၊ သင်သုံးစွဲသော£ ၁၀၀ တိုင်းအတွက်ဘောက်ချာအတွက်£ 23.59 ပြန်ရလိမ့်မည်၊ Jadlam ၏လူမှုရေးစာမျက်နှာများကိုလိုက်ကြည့်ခြင်းနှင့်စာရင်းသွင်းခြင်းအတွက်ပင်သင်၏မွေးနေ့အတွက်အပိုဆုအမှတ်များရရှိလိမ့်မည်။
သင်၏မိတ္တူကို ၀ ယ်သည် 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ် Jadlam မှကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်ကုဒ်ကို သုံး၍ ၎င်းကိုပံ့ပိုးရန်ကူညီလိမ့်မည် Brick Fanatics အနာဂတ်အလျှော့စျေးများနှင့်ကမ်းလှမ်းချက်များယူခြင်းအပါအ ၀ င်လုပ်ဆောင်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
← LEGO လုပ်ပါ Marvel minifigures တွင်eတစ်ခုပါ ၀ င်သည်xtra ဇာတ်ကောင်လား
A classic LEGO ဆောင်ပုဒ်ကိုဇာတ်လမ်းတွဲများတွင်ဝှက်ထားသည် Friends →